HarmonyOS: Huawei wuxuu si rasmi ah u soo bandhigayaa nidaamkeeda hawlgalka | Androidsis
Huawei waxay nooga tagaysaa warar badan shirkeeda horumarinta. Ka sokow inaad naga tagto EMUI 10, Nooca cusub ee lakabkiisa u gaar ahaanta, nooca Shiinaha ayaa nooga tagaya nidaamkiisa hawlgalka u gaarka ah. HarmonyOS waa magaca nidaamka qalliinka ee sumadda Shiinaha, taas oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay. Waxaan ugu dambeyntii ognahay wax walba oo ku saabsan.
HarmonyOS wuxuu aakhirkii noqday magaca la doortay - Huawei ee nidaamkan qalliinka, sida astaantii la diiwaangeliyey dhowr toddobaad ka hor. Waa nidaam aad u gaar ah, oo loogu talagalay inuu ka shaqeeyo dhammaan noocyada aaladaha, waa wax horeyba loogu arkay toddobaadyadan, waana la dhammaystiray.
1 HarmonyOS: Hal nidaam hawlgal oo loogu talagalay qof walba
2 Luuqadaha barnaamijyada lagu yaqaan
4 Cusbooneysiin joogto ah
5 Daahfurka HarmonyOS
HarmonyOS: Hal nidaam hawlgal oo loogu talagalay qof walba
HarmonyOS ayaa hadda lagu dhawaaqay goobta # HDC2019! Sideen u dhiseynaa jawi caqli-gal ah iyo khibrad dhan-seenyo ah? Sideen uga guuleysan doonnaa caqabadaha mustaqbalka OS ee waxyaabaha ku xiran? Joogtay nala socotay si aan u ogaano. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d
Si loo qaabeeyo nidaamkan hawlgalka, Huawei waxay dooratay qaab dhismeedka microkernel, kaas oo lagu dhisayo nidaamka qalliinka ee laga soo bilaabay. Doorashadan maahan wax shil ah oo ka mid ah astaanta Shiinaha, maadaama sida ay yiraahdeen, ay tahay nooc kaamil ah nooc kernel ah, waxay u oggolaaneysaa iyaga inay abuuraan nidaam hawlgal oo aalado badan leh.
HarmonyOS waxay ka shaqeyn doontaa dhammaan noocyada aaladaha, iyo sidoo kale inay si fiican u qabtaan dhammaantood. Tani waa wax in waxaa lagu arki karaa iswaafajinta arjiga. Sida ay Huawei lafteedu xaqiijisay, nidaamkeeda hawlgalku wuxuu la jaan qaadayaa barnaamijyada ku jira HTML, HTML5, Linux codsiyada, codsiyada Android, ee ku qoran C ++ ama Kotlin. Marka adduunyo fursado ayaa ka furmaya arrintan dadka isticmaala, maaddaama dhammaantood ay ka shaqeyn doonaan nidaamka qalliinka.
Tani sidoo kale waa isbeddel loogu talagalay horumariyeyaasha. Maaddaama ay kaliya u baahan doonaan inay abuuraan nooc ka mid ah barnaamijyadooda HarmonyOS, laakiin taasi waxaa loo isticmaali karaa casriga, saacadda ama kombiyuutarka, tusaale ahaan. Waxay si cad ugu fududeyneysaa howshan kuwa abuuri doona ciyaaro iyo codsiyo. Intaas waxaa sii dheer, sida ay xaqiijisay shirkadda Huawei, waxaan helnaa nidaam hawleed furan oo furan (ilo furan), sidaas darteed kuma eka astaanta.
Iyadoo ay taasi jirto, sumadda ayaa ku dhawaaqday taas ujeedkooduna yahay inay wali ku isticmaalaan Android taleefannadooda. Laakiin haddii shil dhaco, sida tii hanjabaadda gugan, waxay isla markiiba u wareegi karaan nidaamkooda cusub ee ay ku shaqeynayaan. Guurista ka socota Android ee u socota HarmonyOS ma ahan wax cakiran, ayay ka leeyihiin shirkadda.
Luuqadaha barnaamijyada lagu yaqaan
Iyada oo loo marayo isku-duwahaaga 'ARK', nidaamka qalliinka wuxuu taageeraa luuqadaha barnaamijyada kala duwan. Waxaan horeyba u aragnay iyada oo ay ugu wacan tahay waafaqsanaanta codsiyada, laakiin Huawei waxay rabtay in ay xoogga saarto in nidaamkeeda hawlgalka uu la jaan qaadi doono luqadahaan barnaamijyada:
Java: Suurtagalnimada luuqadda barnaamijyada ugu isticmaalka badan uguna caansan, taas oo siijirta inkasta oo sanado laga gudbo. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay horumarinta barnaamijka Android
Kotlin: Luqad caan ka ahaanshaheeda ay si cad u kordheyso oo noqotay ikhtiyaar si weyn loo adeegsado abuurista barnaamijyada Android. Waxay u taagan tahay inay sahlanaato barashada waxayna umuuqataa inay noqon doonto mida kala wareegi doonta Java suuqa.
C iyo C ++: C iyo C ++ ayaa suurto gal ah inay yihiin xulashooyinka ugu fiican marka la eego wax qabadka iyo tayaynta. Laba luqadood oo muhiim u ah adduunka xisaabinta, oo u taagan waxqabadkooda wanaagsan, in kasta oo ay xoogaa ka adag yihiin kuwa kale.
Intaas waxaa sii dheer, shaqo ayaa haddaba socota oo lagu taageerayo Linux, HTML5 iyo codsiyada Android. Astaantu waxay faallo ka bixisay inay suurtagal noqon doonto, laakiin waa wax ay hadda umuuqdaan inay horumar ku samaynayaan nidaamkan hawlgalka.
Markii ugu horeysay, #harmonyOS yeelan doonaan TEE la xaqiijiyey (Deegaanka Fulinta ee Lagu kalsoon yahay). Hagaajinta amniga isku xiran ee aaladaha kala duwan ee casriga ah ee ku xiran adduunka oo dhan # HDC2019 pic.twitter.com/o1TF54Hjkc
Huawei wuxuu rabay inuu hubiyo in nidaamkan qalliinka loogu talagalay isku xirnaanta aaladaha si ammaan ah. Waxa ugu muhiimsan kiiskan ayaa ah in qofka saxda ah, oo adeegsanaya aaladda saxda ah, uu heli karo xogta saxda ah. HarmonyOS sidaas darteed waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar badbaado u leh isticmaalayaasha.
Xaqiiqdii, waa la muujiyey taas nidaamku wuxuu adeegsadaa jawi socodsiin aamin ah (TEE: Deegaanka Lagu Fulinayo Aaminaad). Waa wax u oggolaanaya hawlgallada lagu fuliyo aagga processor-ka, kaas oo aad loo xakameeyo iyo sidoo kale in hawlgalladaan muhiimka ah lagu fuliyo nabadgelyo buuxda. Markaa ma jiri doonto wax laga walwalo.
Huawei wuxuu xaqiijiyay in HarmonyOS uu yahay nidaam si joogto ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa. Nooca ugu horreeya ee uu diyaar u yahay in la soo bandhigo dhamaadka sanadkan. Shirkadda ayaa horeyba u qorsheysay inay soo bandhigto nooca labaad sanadka soo socda, halka nooca saddexaadna uu imaan doono sanadka 2021-ka. Nooc kasta oo cusub, astaamo cusub ayaa loogu dari doonaa dadka isticmaala.
Intaa waxaa dheer, qorshayaashu way dhacaan maxaa yeelay cusboonaysiintaani waxay u adeegaan si HarmonyOS u tagto ku ballaadhinta tiro badan oo qalab ah. Maaddaama ay noqon karaan telefoonno, kumbuyuutarro ama saacado, iyo kuwo kale, kuwa adeegsada nidaamkan hawlgalka.
Huawei ayaa horay u shaacisay taas noocani ugu horeeya ee HarmonyOS ayaa lasoo saari doonaa sanadkan, dhamaadka sanadka, oo aan lahayn taariikho cayiman xilligan. Waxay marka hore u imaan doontaa shaashadaha casriga ah ee nooca Shiinaha, oo soo bandhigiddooda loo qorsheeyay dhammaadka sanadkan. Shirkadda ayaa xaqiijisay in sanadaha soo socda, nidaamka hawlgalka la wanaajin doono loona adeegsan doono aalado badan. Wearables, Huawei Vision iyo xarumaha kontoroolka baabuurta ayaa la filayaa inay adeegsadaan.
Wajigan koowaad, HarmonyOS waxaa kaliya lagu sii deyn doonaa Shiinaha. Maaddaama inta badan isticmaalayaasha nidaamkan deegaanka ee sumadda Shiinaha ay ku taal waddanka. In kasta oo ay shirkaddu mar horeba xaqiijisay in laga bilaabo sannadka dambe qorshayaasheedu ay tahay inay nidaamkan ka bilawdo suuqyo badan, iyada oo ku daraysa is waafajinta aalado badan. Xaqiiqdii, sanadka 2020 kombiyuutarka ugu horeeya ee nidaamkan qalliinka ku shaqeeya wuxuu garaaci doonaa dukaamada. Xanta ku saabsan in sannadkan uu jiri doono taleefan Huawei ah oo leh nidaamka hawlgalka illaa iyo hadda waxba kama aysan sheegin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » HarmonyOS: Nidaamka hawlgalka ee Huawei waa mid rasmi ah
Nokia waxay soo bandhigeysaa taleefano cusub IFA 2019